သူမ လုံးဝမကြားဖူးလောက်သေးတဲ့ အလန်းစား ပုံစံများ (1) – Gentleman Magazine
သူမ လုံးဝမကြားဖူးလောက်သေးတဲ့ အလန်းစား ပုံစံများ
၁. The Sport Massage
ပထမ ပုံမှန် Reverse Cowgirl Position နဲ့ စပါ။ ပြီးတော့ သူမ ရင်သားတွေကို သင့်ဒူးပေါ်မှာ နားနိုင်တဲ့အထိ ဒူးကို ကွေးလိုက်ပါ။ အဲဒါဟာသင့်အတွက် သူမရဲ့ ပန်းနဲ့ ခရေအကြား နေရာကို လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ နှိုးဆွပေးနိုင်ခွင့် ပေးပါတယ်။
၂. The USB
သူမ လေးဘက်ထောက်နေစဉ် သင်က သူမနောက်မှာ ရပ်ပြီး တင်ပါးခြင်း ကပ်ထားပါ။ ပြီးတော့ သင် သူမအထဲကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သည်ထိ ရှေ့ကို ကုန်းလိုက်ပါ။ ဒီပုံစံဟာ အထူးအဆန်း ဖြစ်ပြီး သူမ G-Spot ကို နှိုးဆွပေးစေပါတယ်။
၃. The Easy Rider
ပုံမှန် Missionary ပုံစံနဲ့ စပါ။ သူမက ခြေနှစ်ချောင်း ပူးကပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သင်က သင့်ကိုယ်ကို သူမ ခေါင်းဘက် တိုးကပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ သင့်ခြေထောက်တွေနဲ့ သူမကို ဒူးထောက် ခွထားပါ။ ဒီပုံစံက သူမရဲ့ ပန်းဖူးလေးကို ထိခတ်စေပြီး ပိုပြီး အဝင် ကြပ်စေပါတယ်။
၄. The Upward Dog
Doggie ပုံစံနဲ့ စပါ။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ တင်ပါးတွေကို သင့်ရဲ့ ခြေဖနောင့်နဲ့ ထိသည်အထိ ဒူးထောက်ပုံစံနဲ့ နှိမ့်လိုက်ပါ။ သူမက သင့်ခြေထောက်ပေါ်မှာ ထိုင်နေရမှာဖြစ်ပြီး သူမ ခြေဖဝါးတွေဟာ သင့် ဘောတွေနဲ့ ထိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅. The Duct Tape
သူမက ကျောချပြီး ခြေထောက်တွေ မြှောက်ထားခိုင်းပါ။ ခြေ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ထပ်ထားပါ။ သူမရှေ့မှာ ဒူးထောက်ပြီး အတွင်းကို ထိုးသွင်းပါ။ နောက်ကို လက်ထောက်ထားပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ဆက်ဆံပါ။
၆. The Jelly Fish
သင်က ဒူးထောက် သူမက သင့်ရှေ့မှာ သင့်ကို ပေါင်ကားပြီး ဖက်ထားပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဖက်ထားပြီး အပေးအယူ မျှမျှ လှုပ်ရှားပါ။
၇. The Sushi Chef
သူမက တင်ပါးကို အိပ်ရာစောင်းမှာ တင်ထားပြီး လှဲနေပါ။ သူမရှေ့က ကြမ်းပြင်မှာ ရပ်နေပါ။ သူမ ခြေကျင်းဝတ်တွေကို သင့် ပခုံးပေါ် ထမ်းထားပြီး ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်ပါ။ ပြီးရင် သူမ ခြေထောက်တွေကို သူမ နားရွက်ဘက်ဆီ ကွေးပါ။ ဆက် မကွေးနိုင်တော့တဲ့ နေရာရောက်ရင် ဘယ်ဘယ်၊ ညာဘက်တွေကို ယိမ်းပြီး နေရာပြောင်း နှိုးဆွပါ။
၈. The Crunch Master
သူမနဲ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင် ရပ်နေပါ။ သူမကို ခုန်ပြီး သူမခြေထောက်တွေကို သင့်ခါးကို ချိတ်ထားခိုင်းပြီး ထိုးဖောက်ပါ။ သင့်လက်တွေကို သူမတင်ပါးအောက် ထိုးထည့်ပါ။ သူမကို နောက်ကို လှန်ချလိုက်၊ ပြန်မတ်လိုက်နဲ့ သင်တို့ နှစ်ယောက်အတွက် အကောင်းဆုံး ထောင့်ကို ရှာပါ။ ပြီးတော့ အဲဒီထောင့်နဲ့ ပြီးဆုံးလိုက်ပါ။
Previous: လူတွေက ဦးနှောက်ရဲ့ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ သုံးတာလား ?
Next: အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အတုယူစရာများ